ကဗျာ (17) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်စု (1) ဘာသာပြန် (2) ရန်ဖြစ်ခြင်း (1) ဟိုဟိုဒီဒီ (1) တွေးမိတွေးရာ (5) ရေးမိရေးရာ (2)
Blog password ဟိုစမ်း သည်စမ်းနဲ့ မှန်သွားလေတော့ ပို့စ်တင်ချင်လာပါတယ်..။ ရေးလက်စ ရေးလက်စတွေကပဲ များများလာပြီး တစ်ခုမှလည်း အဆုံးမသတ်ဖြစ်ပါဘူး..။ ခုတင်မယ့် ပို့စ်က ဟိုတစ်ခေါက် ရန်ကုန်က ပြန်လာပြီးကတည်းက Draft ထဲမှာ ရှိနေတာပါ..။ ဆိုတော့ကာ.. တစ်နှစ်တောင် မကတော့ပါဘူး။ ဘာလို့မတင်မိလည်းလည်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ခုတော့ တခြားလည်း တင်စရာမတွေ့လို့ ဒါပဲတင်လိုက်ပါတယ်..။ ဆားချက်တယ်ပဲဆိုဆို..။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက်ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ကာတွန်းတစ်ပုဒ်မှာ သည်လိုတွေ့မိပါတယ်။ ဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင် သူငယ်ချင်းက သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ထမင်းစားပြီးပြီလားမေးတော့ ဒေါသတကြီးနဲ့ မင်းက ဆန်ဆိုင်ဖွင့်ထားလို့ လူပါးဝတာလား။ အဆင်မပြေပေမယ့် ထမင်းတော့နပ်မှန်ပါတယ်ကွ ဆိုပြီး ပြောသတဲ့။
ဝါးလုံးကွဲ မရယ်ရပေမယ့် ပြုံးတော့ ပြုံးစရာပါ။ တွေးစရာလေးလည်း ရလာတယ်။
ပြန်လာတဲ့အထိ အဲဒီဇာတ်ကွက်လေးက ခေါင်းထဲပါလာတယ်။ သိင်္ဃသူ့သမီးကျောက်စာလည်း ပြေးသတိရမိတယ်။ “အချင်းချင်း အမျက်အဤတစ်စေ့မရှိ ချစ်သောမျက်စိဖြင့် ကြည့်စေသတည်း...“ ဆိုတာလေးပါ။ ချစ်သောမျက်စိဖြင့်ကြည့်တဲ့။ ချစ်သောမျက်စိဖြင့်ကြည့်ရင် ချစ်စရာ မုန်းသောမျက်စိဖြင့်ကြည့်တော့ မုန်းစရာ။ ချစ်သောနားဖြင့် နားထောင်တော့ ချစ်စရာ မုန်းသောနားဖြင့် နားထောင်တော့ မုန်းစရာလား။ ဟုတ်သလိုပါပဲ။ ခုနက ဟာသမှာလည်း မေးတဲ့လူကတော့ မေးလိုက်တာက သဘောရိုးနဲ့ရယ်။ ဒေါသအခံ (ဒါမှမဟုတ်လည်း သိမ်ငယ်စိတ်အခံ) နဲ့ နားထောင်လို့ လူတိုင်းကြားနေကျ ပြောနေကျစကားလေးက ဒေါသသင့်သွားတာပါ။ အဲဒီတော့ လက်ခံတဲ့ စိတ်က သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကဲ ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ လက်ခံကြမှာလဲ။ သိင်္ဃသူ့သမီးပြောသလို ချစ်သောမျက်စိနဲ့ ကြည့်မှာလား။ ချစ်သောနားနဲ့ နားထောင်မှာလား။ စကားတစ်ခွန်း စာတစ်လုံးသည် ခံယူသူရဲ့ အသိဥာဏ်အဆင့်အတန်း၊ စိတ်အခြေအနေ၊ အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုတွေ ကွဲနိုင်ပါတယ်။ လွဲနိုင်ပါတယ်။ ကွဲကြပါတယ်။ လွဲကြပါတယ်။ ချစ်သော မုန်းသောဆိုတဲ့ ကြားခံနယ်တွေကလည်း စကားရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို တန်ဖိုးပြောင်းစေတာပါပဲ။ ချစ်သောမျက်စိနဲ့ရောကြည့်သင့်ပါရဲ့လား။ တွေးမိခြင်းပါ။ တကယ်တော့ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ဆိုတာတွေဟာလည်း မူလ အဓိပ္ဗာယ်လမ်းကြောင်းကို သွေဖည်စေတာပါပဲ။ လူတွေဟာ အမုန်းကြောင့် အမှောင်ဖုံးသလို အချစ်ကြောင့်လည်း အမှောင်ဖုံးတတ်တာပါပဲ။ ဆင်ခြေတက်နိုင်ပါတယ်။ သိင်္ဃသူ့သမီးရဲ့ ချစ်သောမျက်စိဆိုတာ လူတွေကို စုံလုံးကန်းစေတဲ့ အချစ်ကို မဆိုလိုပါဘူးလို့။ တစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန်၊ နှစ်တက် စားလည်း ကြက်သွန်ပါပဲ။ အမှန်ကို မြင်ချင်ရင် အမှန်ကိုပဲ ကြည့်ရပါမယ်။ ဖော့တွေး ဖိတွေး ဖာတွေး ဖျက်တွေး ကြိုတင်ကောက်ချက်ဆွဲ အမှတ်ပေး အမှတ်လျှော့ခြင်းတွေ ကင်းရပါမယ်။
ဟိုတုန်းကတော့ ဒီလိုပြောကြတယ်။ လောကကြီးကို ဘောင်ခတ်မကြည့်နဲ့တဲ့။ ခုတော့ တစ်မျိုးပြောင်းပြောမယ်။ လောကကြီးကို နေကာမျက်မှန်တပ်မကြည့်ကြနဲ့လို့။
Written by ပီတိ(စိတ်ပညာ) at Monday, March 19, 20123comments:
Phobia တွေ အကြောင်းရေးမယ်လို့ တေးထားတာကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မရေးဖြစ်ဘူး။ ကဗျာလည်း မရေးဖြစ်ဘူး။ စာမရေးဖြစ်လို့ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ ဆိုတော့လည်း ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ ကျောင်းတက်ရတာလည်း တော်တော်လေး ပျင်းနေပါတယ်။ တက်လိုက်ပျက်လိုက်နဲ့။ Assignment တွေ စာမေးပွဲတွေနဲ့ Final Project တစ်ခုကလည်း November မတိုင်ခင် ရှိနေပါတယ်။ ကဗျာရေးဖို့ စဉ်းစားနေပေမယ့် ခေါင်းထဲမှာရော ရင်ထဲမှာရော ဘာမှ မရှိသလိုဖြစ်နေလို့ ဘာမှမရေးဖြစ်ပါဘူး။ Inspiration လိုတယ်ဆိုပြီး စာဖတ်ဖို့ စဉ်းစားပါတယ်။ တစ်ရွက်နှစ်ရွက်လှန်ပြီး အိပ်ပျော်ပျော်သွားပါတယ်။ သူများတွေ ကဗျာရေးတာလိုက်ဖတ်ပါတယ်။ ဘာတွေမှန်း မသိတာနဲ့ ဆုံးအောင်မဖတ်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ နားမလည်တဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ ရေးထားသလို ခံစားရပါတယ်။ ကဗျာဝါသနာမပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောတတ်တာ ပြန်သတိရမိတယ်။ တစ်ခါဖတ်ကြည့် နားမလည်ရင် နှစ်ခါပြန်ဖတ်၊ နှစ်ခါဖတ်လို့နားမလည်ရင် သုံးခါဖတ် သုံးခါဖတ်လို့မှ နားမလည်ရင် ကိုယ့်အဆင့်ကိုယ်သိ၊ ဆိုတာပါ။ အခုတော့ အဲဒါကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲ ပြန်ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘာကိုယ် အရမ်းကိုပုံမှန် ဖြစ်နေသလိုခံစားရပါတယ်။ လူသားဆန်နေတယ်လို့ ထင်နေတာပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နေရတာ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီတိုင်းလေးပဲ နေနေပါတယ်။ ရုတ်တရက် ထပြီး Serious ဖြစ်ချင်လည်း ပြန်ဖြစ်သွားပါမယ်။
အခုလောလောဆယ် ကိုနေမိုးဝေ ရဲ့ စံပယ်ပွင့်ဖြူသူမ ကိုပဲ တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်။ လင်းပွင့်လက်များက e-book အတွက်ကဗျာတောင်းတာလည်း မပေးဖြစ်ပါဘူး။ စာအုပ်အတွက် ကဗျာပေးဖို့လည်း မသေချာသေးပါဘူး။ အားလည်းနာပါတယ်။ အားလည်းမနာပါဘူး။ အားနာရမှာလည်း အားနာမိပါတယ်။ အရင်ကတည်းက ပီတိဆိုတာ သုံးလေးလနေမှ တစ်ပုဒ်ရေးတာပါ။ ရေးချင်လာမှ ချက်ချင်းထရေးတတ်တာမျိုးပါ။ ရေးချင်စိတ်မရှိရင်လည်း ရေးဖို့ မကြိုးစားပါဘူး။ အခု အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုတော့ ကြိုးစားရေးကြည့်ပေမယ့် ကြိုးစားပြီးရေးရတာ ကိုယ့်ဘာကိုယ် အားနာမိပါတယ်။းD ။ သိပ်လည်း စိတ်တိုင်းမကျသလိုရှိတယ်။ စကားမစပ် ကလောင်နာမည်လည်း ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ်။ လျာထားတာတော့ ခဂ္ဂါလို့ပါ။(ဂငယ် နှစ်လုံးဆင့်ပါ) ခဂ္ဂါဦး ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နာမည်က ယူတာပါ။ ဒါးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ ဒီတစ်ယောက်ကလည်း ဒါးခရေဇီ ဆိုတော့ အဲဒီနာမည်ကို ကြိုက်နေတာပါ။
ဒါးဆိုလို့ ပြောပါဦးမယ်။ ပီတိ စာရေးရင် မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းတို့ မြန်မာအဘိဓာန်တို့နဲ့ စစ်ပြီးရေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါးကို ဒ နဲ့ ဒါးလား ဓ နဲ့ ဓါးလားဆိုတာတော့ ကြည့်ဖူးပေမယ့်မှတ်မထားဖြစ်လို့ မေ့သွားပါတယ်။ မေ့ပစ်လိုက်တယ်လို့ပြောရင် ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲအရ ဒ နဲ့ပဲ ဒါးချင်လို့ပါ။ ဓနဲ့ဓါးရတာ အသွားမထက်ဘူလို့ပဲ ခံစားရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး နှစ်ဦးသဘောတူ ဒါးလို့ပဲ ရေးပါတယ်။ (အမှန်က ဘာလဲလို့လဲ လာမပြောကြပါနဲ့။ ပြောလည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒနဲ့ပဲ ဒါးပါမယ်းD)။
ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတိုင်းပဲ ရေးချင်တာတွေ ရေးတာပါ။ စောင့်ဖတ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့ ဘလော့မျိုးလည်းမဟုတ်တော့ ဆားလည်း ချက်စရာမရှိပါဘူး။ ချက်ချင်းချက် ကိုယ့်ဘာသာ ဟင်းချက်ပြီးပဲစားပါမယ်။ ကဗျာတွေစာတွေ တည်တည်တံ့တံ့ပို့စ်တွေတော့ လာချင်လည်းလာပါမယ် ကြာချင်လည်းကြာပါမယ်။ တော်တော်ကြာကြာ ပျောက်ချင်လည်း ပျောက်နေပါဦးမယ်။ ပေါက်ကရတွေပဲ လာလာရေးချင်လည်း ရေးနေပါဦးမယ်။ ဒီစာလည်း ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
Written by ပီတိ(စိတ်ပညာ) at Tuesday, September 21, 2010 1 comment:
Angle တွေ change ကြည့်
ဘုရား ဘုရား အပြင်းစားရောဂါတွေပါလား
ငါ့ဗိုက်ထဲမှာလည်း "အသစ် အသစ် အသစ်" လို့
တကြုတ်ကြုတ်မြည်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် တွေ
အများညီရင် ( ဤ )လည်း ကျွဲ ဖြစ်တယ်
ဘောင်အသစ်ထဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထည့်ပိတ်ကြတယ်။
(လင်းပွင့်လက်များအဖွဲ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး underground ကဗျာစာအုပ် "ခြစ်ရာ ၁ ၂ ၃ ၄ စသည်ဖြင့်" အတွက် ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ ၀ယ်ယူအားပေးလိုသူများ ၊ T9 CyberCafe ၊ သံသုမာလမ်း ၊
ပြည်ထောင်စုခုံးတံတားအနီး ၊ သုဝဏ္ဏမြို့ နယ်တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။)
Written by ပီတိ(စိတ်ပညာ) at Friday, July 09, 20105comments:
စောင့်ရင်းကြမ်းသွားတဲ့ ဆုတောင်းများ (သို့မဟုတ်) ဆုတောင်းကြမ်းတဲ့သူ
ဖြစ်နိုင်တာက ငါ လုံလောက်တဲ့ အားထုတ်ခြင်းအမှုကို မပြုခဲ့လို့ထင်တယ်။
ဖြစ်သင့်တာက ....... ။
လွမ်းစရာကို နာစရာနဲ့ မဖြေပါဘူး
ဘာလို့များ အဲဒီတိမ်တိုက်တွေဆီ လက်တွေကမ်းမြှောက်လိုက်တိုင်းမှာ
အိပ်မက်တွေကိုလည်း လျှော့ဈေးနဲ့ အရုဏ်ဦးအထိ ခမ်းနားကြည့်တယ်
မလုံလောက်သေးတဲ့ မနက်ဖြန်တွေပဲ ထပ်တလဲလဲကွာကျရင်း
Black Hole နဲ့ မရင်းနှီးသလို
Written by ပီတိ(စိတ်ပညာ) at Monday, April 12, 2010 1 comment:
သူမ ဘာကြောင့် ... (၁)
စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်စဉ်းစားတဲ့ logical function တွေက နိုးထလာပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ စကားပြောတဲ့ speech function တွေက activate ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ အခါ အမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ စကားပြောခန်းကို စပါတော့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မရပ်မနားကို ပြောပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ သူမ ပြောတာတွေနားထောင်ပေးမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တရစပ်ကိုပြောပါတယ်။ သူမဟာ သူမရဲ့ ပြဿနာ စိတ်ညစ်စရာတွေရဲ့ အသေးစိတ် ခရေစေ့တွင်းကျကို သူမနဲ့ ရင်းနှီးသူတစ်ယောက်ကို နာရီပေါင်းများစွာပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မကပါဘူး။
Written by ပီတိ(စိတ်ပညာ) at Monday, January 25, 20105comments:
Blog password ဟိုစမ်း သည်စမ်းနဲ့ မှန်သွားလေတော့ ပ...
မှတ်မှတ်ရရ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ဘလော့များ
my words (ကိုနေမိုးဝေ)
အိမ်​သူသို့ (၃) - ကိန်းဂဏန်း​တွေကို အ​လေးထားဖို့မလိုခဲ့တဲ့တိုင်​ အထိမ်းအမှတ်​ဖြစ်​သွားကြတဲ့ကိန်းဂဏန်း​တွေ။ ပန်းပွင့်​​​တွေ မိုးစက်​​တွေကစလို့ သက်​တန့်​​တွေ ​ကောင်းကင...
Best Time To Call Experienced Emergency Electrician Jacksonville - Do your home lights flicker and also confused on what to proceed? It is better to proceed to *Emergency Electrician Jacksonville* as well as we will cert...
ဘယ်တော့မှ ရှိမလာမယ့် အောင်မြင်ခြင်းမျိုးဆက်သို့ - ငါ့ fb ထဲက သေပြီးသား လူတစ်ယောက်က ငါ့ တင်သမျှမသိစိတ် တွေကို အသဲလိုက်ပေးနေတယ် ငါ အာရုံတော်တော်နောက်ရတယ် ဒါနဲ့ ငါ သူ့ကို block မလို့ သူ့ဆီသွားတော့ block button...
- *„Vana roosa maja raamat“ räägib viiest lapsest ,kes uurivad kummituse* *lugu. Loo tegelasteks on Mari, Sadu, Olavi, Reilika, Antoni, fotograaf Ahto,maakle...
အနည်ကျခြင်းနဲ့ သိမ်းထုပ်ထားသော အခါးရောင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ (မောင်မိုးချို)
ပစ္စုပ္ပန်၏ တည့်တည့်အရပ်၌ ရှိသော - အိပ်မက်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးကြယ်သီးကို တပ်လိုက် ။ မျက်စိနှစ်လုံးကို နေသားတကျဖြစ်သည်အထိ စောင့် ။ ဆန္ဒကို လက်ဝဲဘက်ရောက်တဲ့အထိ ခေါက်ချိုးပါးပါးချိုးပြီး ဘယ်ဘက် ဘောင်း...
ကြွက်ကလေးတစ်ကောင် - ကြွက်ကလေးတစ်ကောင် အခန်းတစ်ခုလုံး လင်းထိန်နေအောင် မီးသီးဖြူဖြူတွေ အစီအရီထွန်းထားပြီး ခန်းမရဲ့အလယ်ဗဟိုတည့်တည့်မှာ စားပွဲခုံ အဖြူတစ်လုံး ထိုင်ခုံဆိုဖာ အဖြူတစ...
"သောကြာနေ့ ၊မနက် ၉ နာရီ၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်" - အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီ ဂျိုး ဆွဲလက်စပန်းချီကားထဲ ကျုပ်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ မိုက်လို့ မကုန်နိုင်တဲ့လူငယ်ဘ၀မှာ ဒဏ်ရာအနာတရဆိုတာ ကိုလံဘတ်ရှာမတွေ့ ခဲ့တဲ့ နယ်မြေသ...
မိုး ပြာ ရောင် လွယ် အိတ် (ကြယ်ပန်းလူ)
ကျွန်တော်ပိုပြီးပြင်းတဲ့နေရောင်ခြည်လိုချင်ပါတယ် - *ကျွန်တော်ပိုပြီးပြင်းတဲ့နေရောင်ခြည်လိုချင်ပါတယ်* ဘ၀ကိုဖဲပွတ်သလိုပွတ်ကြည့်ရတဲ့အရသာ ဘယ်လိုနေမလဲ ကျွန်တော်က သွေးအေးသတ္တ၀ါလည်းဖြစ်ချင်တယ် လူပြက်လည်းဖြစ...
ရင်ဝှက်ဂီတ ( မောင်မိုးမြင့် ) - ရင်ဝှက် ဂီတ ................ (၁) မိုးအေးတိုင်း တွေး လူတွေမေးရင် ခေါင်းငုံ့ အကြောက်ဆုံး အချိန် အသံမပေးပဲ ရောက်လာပြီ ။ မပွင့်တပွင့် အပြုံး ရှက်နေ...
ခဏတဖြုတ် သတိပေးကြေညာချက် - ခဏတဖြုတ် သတိပေးကြေညာချက် ရာသီဥတု သာယာရင် ကောင်းမယ် ။ ( အညောင်းမိနေတဲ့ ) လူတွေ လမ်းလျှောက်ထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ စိတ်တွေ လမ်းလျှောက်ထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘ...
ကျွန်တော်၏ အကြောင်း - ကျွန်တော်၏ အကြောင်း ( နောင်လာနောက်သားများသာ သတ်မှတ်ရန် )
ရင်ဘတ်တစ်ခုရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (ဆူးခက်မင်း)
13/07/2010 ကနေ ယနေ့ထိ